Khayre “Dhaqaalaheena ma horumari karo haddii aan la helin…..” (SAWIRRO) – Radio Baidoa
Khayre “Dhaqaalaheena ma horumari karo haddii aan la helin…..” (SAWIRRO)
By Webmaster	 On Jul 5, 2018
Ra’iisul Wasaaraha Xukuummadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ka qeyb galay munaasabadda dib-u-howl gelinta machadka isgaarsiinta qaranka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in loo baahanyahay in la helo xirfadlayaal Soomaaliyeed oo ka qeyb qaata horumarka dalka iyo kobac dhaqaalaha.
“Waxa aan rabnaa in aan la tartanno dunida, waxa aan rabnaa dalkeenna iyo dadkeenna in aan horumarinno. Waxa aan rabnaa in dhaqaalaha waddanka kobcinno. Dhaqaalaha wadankana lama kobcin karo hadii aan la helin dad xirfadlayaal ah. Maadaama aan rabno in aan dhaqaalaha wadanka kobcinno, qof waliba oo Soomaali ah uu isku filnaado, noloshiisu ay wanaagsanaato si dalka iyo dowladnimada uu u jeclaado una difaaco waxaa loo baahanyahay in dadku xirfad yeeshaan”, ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Khayre.
Ra’iisul Wasarha ayaa aad ugu celceliyay in ay Muhiim tahay in la bedelo dhaqankii hore ee ahaa nin jecleysiga, qabyaaladda iyo musuq-maasuqa, laguna bedelo waxqabad iyo daacadnimo.
“Marka aan machadka isgaarsiinta dib u fureyno, dawladda nagu dheggan ee Jabuuti waxa ay maanta isugu yeertay madaxda Afrikaanka ah si ay tusiso balaayinnta doollar ee ay ku maalgashadeen ganacsiga, dawladda Kenya waxa y dhoofineysaa Shidaal, dawladda Ethiopia sidaas oo kale. Waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed in ay hurdada ka kacaan oo la xisaabtamo. Qabyaalada aan qarranimo ku bedelno, laaluushka iyo Musuq-maasuqa aan daacanimo ku bedelno, Fadhi ku dirirkana aan shaqo ku bedelno”, ayuu ku boorriyay ka qeyb galayaasha Munaasabadda.
Wasiirka Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyadda Federaalka Soomaaliya Eng. Cabdi Canshuur Xasan, oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in dib u furitaanka Machadka ay qiima weyn ugu fadhido Hawl-wadeennada wasaaradda, dawladda Soomaaliya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Wasiirka ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku reja weyntahay in kaadiriinta lagu tababarayo Machadka Isgaarsiinta qaranka ay musqabalka horumariyaan Software aduunka loo dhoofiyo, waxa uuna ka dalbaday hey’adaha isgaarsiinta in ay taageeraan machadka.
Machadka Isgaariinta qaranka oo qeyb ka ah wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyadda waxaa la’aasaasay June 28, 1976, si loogu tababaro shaqaalaha isgaarsiinta ee isugu jira Farsamayaqaannada iyo injineerada.
Afhayeenka Gobolka Banaadir oo la magacaabay
Duqa Muqdisho oo xilka ka qaaday Guddoomiyaha Hodan
SAWIRO:-Mashaariicyo laga Dhagaxdhigay Magaalada Baydhabo
MW Farmaajo Oo Abaal mariyey Xubinhii ka soo Shaqeyey Dib uso Celinta Hawada Dalka
RW Rooble iyo Laftagareen Oo Xariga Ka Jaray Mashruucyo La Hirgeliyay:-SAWIRO